Astaamaha iyo muhiimada ay leedahay tropopause | Saadaasha Shabakadda
Wax kasta oo aan ugu yeerno saadaasha hawada iyo waxyaabaha kala duwan noocyada cimilada waxay ku dhacaan meelaha loo yaqaan 'troposphere'. Taasi waa, kaliya mid ka mid ah lakabyada jawiga. Meesha loo yaqaan 'troposphere' waa aagga jawiga aan ku nool nahay taasna waxay ku dhammaataa inta u dhexeysa 10 ilaa 16 km sare. Meesha kore waxaa ka mid ah isweydaarsi. Xadka calaamadeeya labada lakab ayaa ah cunuggu. Tani waa mowduuca maqaalkan.
Tropopause waxay leedahay astaamo kaladuwan oo udhaxeeya lakabyada ay kala saarto waana waxa cimilada ka dhigaya khadka ugu dambeeya. Qoraalkan waxaan kuugu sheegeynaa dhammaan wixii ku saabsan tropopause.
2 Noocyada tropopause sida ku xusan joogga iyo loolka
4 Phenomena oo ay keento tropopause
Waa aag la joojinayo oo u dhexeeya meesha loo yaqaan 'troposphere' iyo 'stratosphere'. Sidaan ognahay, troposphere waa aagga ay ku kala duwan yihiin noocyada daruuraha roobabkuna wuu dhacayaa. Lakabkaan kor ku xusan, astaamaha, halaasaska gaasaska iyo waxyaalaha kale ee jawiga ayaa gebi ahaanba isbadala. Tusaale ahaan, stratosphere-ka ayaa caan ku ah lakabka ozone Waxay inaga ilaalinaysaa falaaraha qorraxda ee waxyeelada leh.
Tropopause waa midka tilmaamaya xadka sare ee jiritaanka uumiga biyaha ee hawada. Laga soo bilaabo heerkan dhererka, hawadu gebi ahaanba way qallalan tahay. Mid ka mid ah astaamaha xadkaani u taagan yahay ayaa ah inuu u weecdo kuleylka kuleylka. Taasi waa, heerkulka stratosphere wuxuu kordhiyaa dherer halkii uu ka yarayn lahaa. Tani waxay joojisaa dhammaan dhaqdhaqaaqyada hawada toosan marka lagu daro xoogga dabaysha jiifka ah ee stratosphere.
Wejiga heerkulka ee kororka Rogitaanka kuleylka waa 0,2 digrii 100 mitir. Ka soo horjeedda caqiidada caanka ah, tropopause ma aha lakab joogto ah. Way iska soo horjeeddaa. Markaan u guureyno bartamaha-latteega iyo kuleylaha, waxaan ku arki karnaa xoogaa nasasho ah labada cirif. Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan ayaa ah in dillaacyadan ay la jaan qaadayaan astaamaha ay qulqulka diyaaradda.
Furitaanka tropopause waxay u oggolaaneysaa ozone-ka ku jira stratosphere iyo hawo qalalan inteeda kale inay soo galaan troposphere. Qiimaha sare ee tropopause waxay ku soo dhacayaan aagagga ilaa dhulbaraha ilaa ulaha. Si kastaba ha noqotee, heerkulku wuxuu ku kordhaa joogga.
Noocyada tropopause sida ku xusan joogga iyo loolka
Waxay kuxirantahay isbadalka cimilada iyo saadaasha hawada daqiiqad kasta, dhererka tropopause wuu kala duwan yahay. Tusaale ahaan, way ka sarreysaa marka ay jiraan xinjirowga lidka ku ah lakabyada hoose waana ka hooseeyaa marka ay jiraan niyad jab ama duufaan Heerkulku wuu is beddelaa iyadoo ku xidhan loolka aad joogto. Waxaa jira aagag ay ku taallo -85 ° C iyo meelaha kale oo ah -45 ° C.
Sidan oo kale, saddex xaaladood oo kala duwan ama saddex nooc oo tropopause ah ayaa lagu garan karaa, iyadoo ku xidhan aagga ay ku taal iyo sidoo kale loolka iyo joogga.
Nooca 1 ama mid caadi ah Waa mid leh xaalado taagan inta badan. Ma jiro qaboojin diiran ama qabow oo ku taal xayndaabka 'troposphere'.
Nooca 2 ama H Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'tropopause sare'. Waa mida tilmaamaysa marka uu jiro nooc ka mid ah xaraashka diirran ee aagga sare iyo dhexe ee troposphere-ka. Tani badiyaa waxay dhacdaa iyadoo ay jiraan jirro diirran oo lidka ku ah jirka.
Nooca 3 ama S. Sidoo kale loo yaqaan sunken. Waxay u dhigantaa marka qabow qabow ka soo ifbaxay lakabyada sare ee troposphere inta kalena waa la sameeyaa marka ay jiraan aagagga cadaadis hooseeya ee lakabyada hoose.
In kastoo aysan u ekaan karin, xariiqan kala goynaya labada lakab ee jawiga ayaa ahmiyad weyn u leh nolosha Dunida. Waxa ugu horeeya ayaa ah in mahadaas ay siiso heerarka sare, ee caanka ah daruuraha cirrus.
Waxay u adeegtaa sidii keyd biyo ah, maadaama ay awood u leedahay inay keydiso uumi badan oo biyo ah xadka ugu hooseeya ee ka yimaada meelaha kuleylaha ah. Qaar badan oo ka mid ah xeryahooda ku jira xadkaani waxay u adeegaan inay si fiican u fahmaan saameynta isbedelka cimilada iyo sida ay u saameyn doonto meeraha. Tani waa sida qorshooyinka kale loo qaabeyn karo si loo yareeyo qaar ka mid ah waxyeelada ugu halista badan ee ay keento ifafaalaha.
Daruuraha ku gaadha tropopause ee qulqulka mawjadaha qulqulka ayaa joojiya kor u kaca waxayna u egtahay inay ku dhacayaan gidaar muraayad ah. Ha u ogolaan daruuraha inay dul sabeynayaan maaddaama ay leedahay cufnaan la mid ah hawada ku hareeraysan. Kiiska kaa soo horjeedaa wuxuu ka hooseeyaa meesha loo yaqaan 'tropopause', halkaas oo hawadu leedahay buoyancy oo u oggolaanaysa inay kor iyo hoos u dhaqaaqdo. Duufaannada ugu xoogga badan meelaha loo yaqaan 'troposphere' waxay ku garaacaan daruuraha qaar ka mid ah meelaha wax lagu cuno.
Phenomena oo ay keento tropopause
Waxaa jira ifafaalooyin qaarkood oo dhaca taas oo ay ugu wacan tahay jiritaanka xaddidan. Waxaan mid mid u falanqeyneynaa.
Midka koowaad ayaa ah, kolba haddii kororka CO2 uu kordho, waxay kordhiyaan tirada shilalka ay moleculeladu ku yeeshaan gaasaska kale sida nitrogen. Inta lagu jiro naxdintaas waxaa jira nuugista tamarta firfircoonida waana marka la soo saaro waxa loo yaqaan shucaaca infrared. Waa nooc shucaac ah oo ka tirsan qaybta elektromagnetic-ka oo leh dherer dherer dheer. Tani waxay kordhisaa kuleylka.
Markay tani dhacdo, waxaa si fudud oo fudud loo wareejiyaa kuleylka gobolka troposphere kaasoo kordhiya heerkulka. Haddii dhacdadani ka dhacdo dabaqadda 'stratosphere', shucaaca infrared ee la soo saaray ayaa u baxsan kara booska, maaddaama ay jirto cufnaan hoose oo hawo ah. Adoo yeelanaya cufnaan yar, hawadu waxay awoodaa inay qaboojiso lakabyada ugu sareeya ee jawiga.
Dhacdada labaad ee ku timaadda tropopause waa taas Waxay ku dhacdaa uruurinta sii kordheysa ee CO2. Xaaladdan oo kale, waxay nuugaysaa kuleylka dhulka ka imanaya waxaana jira koror heerkulka qaybta hoose ee jawiga. Sidaa awgeed shucaacku wuxuu gaarayaa lakabyada ugu sarreeya.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto tropopause.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Joojinta